ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့) - မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)
ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့)
ကို (၂၈.၈.၂၀၂၀)ရက်၊ သောကြာနေ့၊ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ် (၃၁)ဦးအနက် (၂၈)ဦးတက်ရောက်ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်(၃၁)ဦးအနက် (၂၈)ဦး တက်ရောက်မှုအခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်း (၅) ခု မေးမြန်းခြင်း
နှင့်ဖြေကြားခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏကျော်မှ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် မွန်ပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရဆိုင်ရာစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း) တင်သွင်းခြင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှသုံးသပ် ချက်အစီရင်ခံစာဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း၊ ဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စား လှယ်များသည် ယနေ့ရုံးချိန်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံတွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်းကြေညာခြင်း၊မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး
ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏကျော်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊မွန်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့မှ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း၊ ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေး လိုသည့်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ယနေ့ရုံးချိန်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံတွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်းကြေညာခြင်း၊ အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကတင်သွင်းခဲ့သော မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစိစစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ၏လုုုုုပ်ငန်းဆောင်ရွက်
ချက်အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦး၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်တို့မှအကြံပြုဆွေးနွေးခြင်း၊
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စည်ပင်သာယာရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးမင်းကျော်လွင်မှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊အစီရင်ခံစာတင်သွင်းသောမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစိစစ်
ဦးအောင်ကျော်သူမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၅၊ ပုဒ်မခွဲ
(စ)၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ
(စ)တို့အရ အစီရင်ခံစာကို ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်၊ ဝန်ကြီး၏ဆွေးနွေးအကြံ
ပြုချက်များနှင့်အတူ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ မှတ်တမ်းတင်ကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ
ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်းတို့်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)
တွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ မေးခွန်း(၅)ခုမေးမြန်း
ဖြေကြားခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်း(၂)ခု တင်သွင်းခြင်း၊ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးတွင်ဖိတ်ကြား၍တက်ရောက်သူ(၇)ဦး
ဒုတိယအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့)ကိုမွန်းလွဲ(၁၂း၁၀)နာရီအချိန်တွင်ရပ်နား၍ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့)ကို (၃၁.၈.၂၀၂၀)ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
2021 Copyright © All Rights Reserved. မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်. Creative by Digital Dots.